Orinasa Ambatovy Nanolotra akanjo fiarovana miisa 3000 ireo mpitsabo
Taorian’ny nanomezany akanjo fiarovan-tena 5 200 ho an’ny Tompon'andraiki-panjakana sy ny mpiasan’ny fahasalamana tao Toamasina, Brickaville, Moramanga, sy ho an’ny
Kaominina Antananarivo Renivohitra, tamin’ny fiandohan’ity volana aprily ity, dia nanohy ny fandraisany anjara amin’ny ady atao amin’ny valanaretina Covid-19 ny orinasa Ambatovy. Nanolotra akanjo fiarovan-tena miisa 3000 ho an’ny hopitaly eto Antananarivo ny orinasa ny sabotsy teo. Afaka manaron-tava sy loha ireto akanjo fiarovana ireto ary afaka miaraka tsara amin’ny arovava fifohan-drivotra. Miaro amin’ny mety fivangongoan’ny aratra noho ny fikirakirana fitaovana maro samihafa na « traitement antistatique » sady miaro koa amin’ireo singa madinika mety hateraky ny « radioactivité» (EN 1073-2, sokajy faharoa) sy ireo singa mitondra tsimokaretina (EN 14126) ka mahafeno ny fenitra teknika sy ny lafiny fahasalamana takiana, hoy ny fanazavana. Ireo mpiasan’ny fahasalamana voalohan-daharana, mitsabo ireo mararin’ny COVID-19 sy ireo manao fitiliana, ary ireo rehetra manana andraikitra mivantana ka mety atahorana hifindran’ny Covid-19 no hampiasa ireto akanjo fiarovana ireto, mba hiarovany tena amin’ny tsimokaretina. Ho fampahatsiahivana ary tafiditra indrindra ao anatin’ny ady atao amin’ny fiparitahan’ny valanaretina covid-19 dia manampy ireo fanomezana efa nataon’Ambatovy ity fanolorana akanjo fiarovana ity, ka isan’ireny ny akanjo fiarovana 5 200 voalaza tetsy ambony, fitaovana sy kojakoja harifomba momba ny fahasalamana natolotra ny Hôpitalin’i Toamasina sy Moramanga, sakafo indray mihinana an’arivony mandritra ny 15 andro ho an’ny mpiasan’ny CHU Morafeno sy ny « Centre de commandement opérationnel » ao Toamasina, ary ho an’ireo mpiasa miandraikitra ny « barrages sanitaires » eny amin’ny Lalam-pirenena faha 2 (Marozevo sy Beforona), hoy hatrany ny fanazavana.